Anigu ma DOONAYO in uu igu dhaco cudurka HIV. Maxaan samayn karaa? Sideen u ilaalin karaa nafsadayda? – Tips for refugees
Anigu ma DOONAYO in uu igu dhaco cudurka HIV. Maxaan samayn karaa? Sideen u ilaalin karaa nafsadayda?
Haddii aad u isticmaashid kondomyada si sax ah, kuguma dhacaayo cudurka HIV tooska galmada.
Kondomyadu waxaa laga soo iibsan karaa meelo baddan,
sida dukaamada waawayn ee laga soo adeegto, boosteejooyinka baansiinka ama batroolka ama farmashiyooyinka.
Muhiim: Ha isticmaalin kondomyada la dhigay qoraxda.
Ha isticmaalin kondomyo hore oo qadiim ah.
Ha isticmaalin kondomyo dilaacsan.
Isticmaal kondomka marka aad doonaysid in aad galmo la samaysid gabar ama wiil.
Xubinka taranka raga ku jiid ama geli kondomka.
Kondomyadu waxay bixiyaan ilaalin wanaagsan.
Waxaan qabbaa su’aalooyin kusaabsan fayraska HIV iyo cudurka AIDS. Qofkeen la hadli karaa?
Haddii aad qabtid su’aalo kusaabsan fayraska HIV iyo cudurka AIDS, waxaad caawimaad ka heli kartaa dhinaca AIDSBERATUNGSSTELLE (Xarunta Tallada AIDS-ka) ama AIDSHILFE (Xarunta Taageerada AIDS-ka).
Xarumahaan waxaa laga heli karaa magaalooyin iyo tuulooyin baddan.
Adigu ma ahan in aad bixisid lacag ayaguna ma ahan kuwo kala hadla qofkale su’aalahaaga.
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay 16 sanno jir. Dhakhtar ayaa i weydiiyay haddii aan qabbo HIV ama AIDS. Maxaa laga wadaa HIV? Maxaa laga wadaa AIDS?
Next Next post: Sideen ku oggaan karaa haddii aan qabbo fayraska HIV?